Ihe kpatara GDPR Ji Dị Mma maka Mgbasa Ozi Dijitalụ | Martech Zone
Ihe kpatara GDPR Ji Dị Mma maka Mgbasa Ozi Dijitalụ
Tuesday, June 26, 2018 Tuesday, June 26, 2018 Ọ bụ Larry Harris
Iwu sara mbara nke akpọrọ Iwu Nchekwa Data General, ma ọ bụ GDPR, malitere na May 25th. Oge imechi nwere ọtụtụ ndị na-egwu mgbasa ozi dijitalụ na-egwu egwu na ọtụtụ ndị ọzọ na-echegbu onwe ha. GDPR ga-akwụ ụgwọ ma ọ ga-eweta mgbanwe, mana ọ bụ mgbanwe ndị na-ere ahịa dijitalụ kwesịrị ịnabata, ọ bụghị ụjọ. Nke a bụ ihe kpatara ya:
Ọgwụgwụ nke Pixel / Cookie-based Model Dị Mma Maka Industrylọ Ọrụ
Nke bụ eziokwu bụ na ọ dịla anya oge gwụrụ. Ndị ụlọ ọrụ nọ na-adọkpụ ụkwụ ha, ọ bụghịkwa ihe ijuanya na EU na-eduzi ebubo na ihu a. Nke a bụ mmalite nke njedebe maka ụdị dabere na pixel / kuki. Oge nke ịzu ohi data na ịchacha data agafeela. GDPR ga - eme ka mgbasa ozi na - eme ka data ghara ịbanye na ikike dabere na ikike, ọ ga - enyekwa usoro dị iche iche dịka ịchigharị na ịkọgharị obere mbibi na mbibi. Mgbanwe ndị a ga-eweta oge ọzọ nke mgbasa ozi dijitalụ: ahịa ndị mmadụ, ma ọ bụ nke na-eji data nke mbụ kama data data ndị ọzọ.
Omume Ọjọọ Ọjọọ Ga-emebi
Ndị ụlọ ọrụ na-atụkwasị obi nke ọma na ụdị omume ezubere iche maka omume ga-emetụta ọtụtụ. Nke a apụtaghị na omume ndị a ga-apụ kpamkpam, ọkachasị ebe ọ bụ na ha bụ iwu na ọtụtụ mba na-abụghị EU, mana ọdịdị dijitalụ ga-agbasa na data nke mbụ na mgbasa ozi gbasara ya. You'll ga-amalite ịhụ mba ndị ọzọ itinye ụdị usoro iwu a. Ọbụna ụlọ ọrụ ndị na-arụ ọrụ na mba ndị na-anaghị adaba na GDPR ga-aghọta eziokwu nke ahịa ụwa ma meghachi omume na ntụpọ ifufe na-efe.
Ogologo Ogologo Oge Data Na-ehichapụ
Nke a dị mma maka mgbasa ozi na ịzụ ahịa n'ozuzu. GDPR emeelarị ka ụfọdụ ụlọ ọrụ dị na UK rụọ ọrụ na-ehicha data, dịka ọmụmaatụ, ịhapụ ndepụta email ha site na ụzọ abụọ n'ụzọ atọ. Offọdụ ụlọ ọrụ ndị a na-ahụ ọkwa mepere emepe wee pịa elu n'ihi na data ha nwere ugbu a ka mma. Nke a bụ ihe doro anya, nke doro anya, mana ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ịkọwapụta na ọ bụrụ na esi anakọtara data dị n'elu-ma ọ bụrụ na ndị na-azụ ahịa jiri obi ha na-akpachara anya na-abanye, ị ga-ahụ ọnụego aka dị elu
Ọ Dị Mma Maka OTT
OTT guzo maka n’elu-n’elu, okwu eji eme ihe maka ịnyefe ihe nkiri na ọdịnaya TV site na ịntanetị, na-achọghị ka ndị ọrụ debanye aha na eriri USB ma ọ bụ satellite na-akwụ ụgwọ-TV.
N'ihi ọdịdị ya, OTT dị mma nke sitere na mmetụta GDPR. Y’oburu n’ichoghi gi inyoghi, achughi i zubere, belụsọ, dịka ọmụmaatụ, ị na-ekpuchido onwe gi na Youtube. Na mkpokọta, agbanyeghị, OTT dabara adaba maka ọdịdị ala dijitalụ a na-agbanwe.
Ọ Dị Mma Maka Ndị Nkwusa
O nwere ike isiri gị ike n'oge na-adịghị anya, mana ọ ga-adị mma maka ndị mbipụta ogologo oge, ọ bụghị n'adịghị ka ihe anyị na-amalite ịhụ na ụlọ ọrụ na-ejikwa ọdụ data email ha. Ihe omuma data ndi a na-acho nwere ike ibido ihe ojoo, dika ekwuru n'elu, mana ulo oru GDPR na-ahukwa ndi debanyere aha ha.
N'otu aka ahụ, ndị na-ebipụta akwụkwọ ga-ahụ ndị na - azụ ahịa ọdịnaya ha ka ha jiri usoro ịpụ apụ na-arụ ọrụ nke ọma. Nke bụ eziokwu bụ na ndị na-ebipụta akwụkwọ enweghị njirisi na ntinye aha na ịbanye na ogologo oge. Optdị nhọrọ nke ụkpụrụ GDPR dị mma maka ndị nkwusa, n'ihi na ha chọrọ data nke mbụ nke ha ga-emetụta.
Onwe / Nsonye
GDPR na-eme ka ụlọ ọrụ ahụ chee echiche nke ọma banyere otu esi abịaru nso na njiri mara, nke agbanweela kemgbe oge ụfọdụ. Ọ ga-esiri ndị na-azụ ahịa spam ike, ọ ga-emekwa ka ụlọ ọrụ ahụ wepụta ọdịnaya nke ndị ahịa chọrọ. Usoro ohuru choro ka ndi mmadu tinye aka. O nwere ike isiri anyị ike inweta, ma ihe ga-esi na ya pụta ga-aka mma.
Tags: ịkpọsantaramahụhụkukikukianya mdigital mgbasa oziNchịkwaottn’elu-n’elupixeltrackingpixel nsochi
Ọ bụ Larry Harris
Larry Harris bụ onye isi oche nke Sightly, usoro ikpo okwu vidiyo arụmọrụ na-eji ndị mmadụ elekwasị anya iji dakọtara ndị na-ekiri ya na mgbasa ozi vidiyo ahaziri iche.
Ndaba: Ngwaọrụ Nguzosi Ike n'Ezi Ihe maka Nchịkwa CRM gị
Enyi na Enyi: Mmemme Ntuziaka, Ntughari Ntugharị, na Nzipu Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi